Andrey Arshavin Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu
Home AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ ASIAN Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-enye Full Story of a football football best known by the nickname; 'Shava'. Anyị Andrey Arshavin Child Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Na-amalite.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ mbido
Andrey Sergeyevich Arshavin nke Sergey Arshavin (nna) na Tatiana Arshavina (nne) mụrụ na 29 May 1981 na Saint Petersburg.
Ọ gbapụrụ ihe ọghọm nke gaara egbu ya mgbe ụgbọ ala kụrụ ya ka ọ bụ nwatakịrị. Ndị mụrụ ya gbara alụkwaghịm mgbe ọ bụ 12, ọ bụ oge ọ chọrọ ha abụọ ọnụ. Isoro nne ya na-arapara n'ahụ ka nne ya dara ogbenye. Andrey na-ehi ụra n'elu ala nke nne na nna ya. O nwere nrọ ya nke ịghọ ndi nadighi ama site na nwata.
O di nwute, nna ya chetara ya ma bia bia nyere ya aka ka ya na nrọ ya. Ọ bụ nna ya mere ka ọ gbasaa ọrụ football mgbe ọ na-adaghị ịghọ ọkachamara egwuregwu.
Arshavin malitere ịkụ ọkpọ na nwata n'oge ọ dị afọ asaa. Papa ya debara aha ya n'ime Smena football academy of Zenit, ụlọ nke obodo ya. E mere Ashavin ka ị tụlee ihe gbasara agụmakwụkwọ ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa ka ị na-aṅa ntị na football n'oge ụfọdụ. N'ihi nke a, ọ gara ụlọ akwụkwọ dị nso na football acaademy. A na-agụ ya ịgụ akwụkwọ ya ma na-egwu bọlbụ n'otu oge ahụ.
Ka oge na-aga n'ihu na ya na-eme ka ọ mara ihe egwuregwu ahụ, ịhụnanya ya maka ịgba bọl na-eto eto ka nke ahụ na-abaghị uru. N'oge ụfọdụ, ọ pụghị ilekwasị anya na agụmakwụkwọ. Nleghara ya maka agụmakwụkwọ na-edugakarị n'àgwà ọjọọ.
Dị ka Andrey si kwuo "M mere ihe ọjọọ n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe m nọ na klas nke abụọ, ana m akwatu akwụkwọ ndekọ nke klas ahụ naanị n'ihi na achọghị m ịga klas. Ọ bụ ihe a merenụ mere ka m chụpụ. "
Ọ ghaghị ịlaghachi na mahadum iji soro ndị enyi ya. Ọ bụ ya bụ nwatakịrị na onyeisi ndị agha ya. Ikebịghike enye ama akabade edi akamba itie kiet ke obio.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ọrụ na Nchịkọta
Arshavin mere onye mbụ ya na bọl ọkachamara na August 2, 2000. O doro anya na ọ dị na ala Bekee. Nwa 19 gbara afọ iri na anọ na Andrey Kobelev n'oge ochie Zenit si 3-0 merie Bradford City na Intertoto Cup.
Onye na-eto eto ga-echere otu afọ ka ọ bụrụ onye na-aga n'ihu na steeti Petersburg malite iri na otu. N'ihe niile, o jiri Zenit nọrọ oge asatọ, isi ihe mgbaru ọsọ 71 na ịnye 100 na-enyere aka na 281 anya na asọmpi Russia na mba ụwa. Ọ ghọrọ dike maka St. Pete Fans, onye kpọrọ aha ya "Shava", na ezigbo ihe nnọchianya nke ụlọ ọrụ si Northern Isi.
A na - akpọ ya Player nke Soccer nke afọ na 2006, ma ọ bụ afọ abụọ nke Arshavin na club - mgbe onye nchịkwa Dutch bụ Dick Advocaat buuru - nke mere ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma.
Ọ site na mmalite afọ dị ka onye ofufe nke FC Barcelona ma ọ dịghị gọnahụ eziokwu ahụ ọ bụ nrọ nke na-egwu maka ọgbakọ Catalan. Ọ bụ Arsenal zuru obi ya.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ Ezinụlọ
A mụrụ ya na otu ezinụlọ na-arụ ọrụ. Nna ya bụ Sergey Arshavin na-egwuri egwu dị ka onye na-agba ọsọ n'ịgba chaa chaa. Tatiana Arshavina bụ nne nke football soccer Andrei Arshavina. Sergey Arshavin nwụrụ site na nkụda obi mgbe ọ dị afọ 40.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Yulia Arshavina mụrụ na 3 June 1985 (afọ 32), bụ Andrey Arshavin nwunye mbụ. Ha lụrụ na 2004 ma gbaa alụkwaghịm na 2013. Arshavin nwere ụmụ atọ na ya - Arseniy Arshavin, Artem Arshavin na nwa Yana Arshavina. Mgbe ha gbara alụkwaghịm, Ashavin gbapụrụ. N'ụzọ dị mwute, ruo ihe karịrị afọ atọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha anaghị ekwurịta okwu ma ọ hụghị ụmụ ya. Yulia egbochighị ya ime otú ahụ. Kama nke ahụ, ọ bụ Ashavin bụ onye na-emeghị ihe nrụgide ahụ. Ọ zitere ndị obodo na onyinye.
A kọrọ na 3 afọ mgbe ọ gbachara alụkwaghịm, Ashavin kpebiri ịlụ di ọzọ. Mkpebi ya bịara mgbe ya na ụmụ ya na-esonyere nwunye ya. O kekọtara eriri ya na enyi ya oge ochie Alice Catimini. Ndị hụrụ n'anya lụrụ na September 1, 2016 na Saint-Petersburg.
Ọ bụ naanị ndị mmadụ kachasị nso, gụnyere ụmụaka site na alụmdi na nwunye mbụ nke Alice, na-aga ememme a, na ememe ahụ, ndị ọbịa ahụ nwekwara obere nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ kpebiri ime ihe niile n'atụghị egwu, n'ụlọ. A makwaara na Alice gbanwere aha ya, na-aghọ Arshavina.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Onye Okike Ejiji
Arshavin agbasowokwa akwụkwọ ikike na omume na Ejiji Ejiji.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Onye ọchịchị
Na 2007, o tinyere aka na nhoputa ndi ochichi dị ka onye na-eme maka Ụlọ Nzukọ Iwu St. Petersburg maka nnọkọ United Russia. Onye ọkpụkpọ bọl ahụ meriri ntuli aka, mana ọ hapụrụ iwu ya mgbe e mesịrị.
Ndi oru ya weputara obodo ya mara mma "Arshavinka" mgbe onye na-egwu egwu nke ex-Arsenal. Nke a bụ n'ihi ịhụnanya ha nwere maka ya.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Onye edemede
Andrey Arshavin bụ onye edemede, onye nwere akwụkwọ atọ na mmalite ya: "Euro-2008. Guus na ìgwè ya. The Diary of Andrey Arshavin "; "Anyị mere ya! Akụkọ nke Oké Mmeri ahụ "; na "Arshavin, gụnyere nke a na-akpọ 555 Ajụjụ na Azịza banyere Women, Ego, Politics and Football.
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Charity
Ọ na-esonye n'ọrụ ọrụ ebere. Arshavin kwetara na ọ ga-abụ onye nnochite anya nke obodo SOS Ụmụaka n'obodo Pushkin dị nso na St. Petersburg.
Bọchị edoziri: July 23, 2018